घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको मार्च 6, 2019
एलबीले पूर्ण स्टोरीको कट्टर स्ट्राइकरलाई प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "Rosemary"। हाम्रो ईमानमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बिद्यार्थी तथ्यले तपाईका बचपन समयदेखि घटनाको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक समस्याहरू र उहाँका बारेमा केही बन्द र अन-पिच तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हजुरआमाले सबैलाई आफ्नो अचम्मको बारेमा चिन्ता छ तर कमलले धेरैलाई रोचक बनाएका इम्यानुएल एडेबेयरको जीवनीलाई विचार गर्छन्। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
इमानुएल एडबेयोर लेम, टोगोमा 26 को 1984th दिनको जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो बुबा, शद्राच एडबेयू अडिई र आमा, हजिया एडबेयभरमा जन्मनुभएको थियो।
एडिबेयर आफ्नो जीवनको पहिलो चार वर्षको लागि हिंड्न सकिएन। उनको आमाले पश्चिम अष्ट्रेलिया वरपर गरीब एडबेययर लिएर संघर्ष गरेकी थिइन।
Adebayor त्यसपछि आफ्नो 'चमत्कार' भन्दै बारेमा कुरा गरे, "... म चर्च बिछ्याउँदै थिए र लगभग9वा दश बजे एक आइतबार बिहान, मैले बच्चाहरु खेलिरहेको सुन्न सक्थे। अचानक कसैले चर्चमा बल ल्यायो। र उठ्ने पहिलो चोटि पहिलो व्यक्ति थियो me becaम त्यो बल प्राप्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो चमत्कार देखेपछि यो थियो। एक दिन मैले एहसास गरे कि परमेश्वरले मलाई फुटबलर बनाउनुभएको छ "
Adebayor उनको देशको स्थानीय ओसी अगजामा टोगोमा उजागर भएको थियो जहाँ उनले रैंक उठ्यो। उनी एक युवा टूर्नामेंट मा मेट्ज स्कोउट, फ्रान्सिस डी ताडेडो द्वारा देखी र पछि फर्जी फ्रान्स आए। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
टोगोलिसे फुटबलर र टोटेनहम हट्सपुर अगाडी बढ्दै गएको छ इमानुएल एडबेयरे सामान्यतया आफ्नो व्यक्तिगत जीवन निजी राख्छ, र उनको पत्नी Charity Adebayor नाम को बारे मा जान्दछन। उहाँ प्रायः उनी युरोपमा उच्च-प्रोफाइल कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनुहुन्छ।
इमानुएल एडबेयोर र पत्नी, चैरिटी
एडिबेयर्स र चारिटी एक छोरी हो जसको नाममा केन्द्र एडबेययर्स। त्यो जून 2010 जन्मिएको थियो।
बुबा र छोरी- इमानुएल र केन्द्र
इमानुएल एडबेयोर र उनको छोरी, केन्द्र तलको फोटोमा आश्चर्यचकित देखिन्छ।
Adebayor र छोरी एक स्न्यापशटको लागि posses
2013 मा केन्द्रले आफ्नो तेस्रो जन्मदिनलाई भव्य शैलीमा मनाए। तिन करोडपति बुबाले उनको लागि उत्तम पार्टी राख्नुपर्छ।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -परिवार
Adebayor को पिता ओडिओ ओटिन स्थानीय सरकार मा इगबेये नामक एक सानो गाँउ बाट छ
ओसुन स्टेट, नाइजीरिया को क्षेत्र। उनको पिता शदक्राद एडबेयोर अडिइ 2005 मा मृत्यु भयो, पछि उनको आमा, हजिया विज्ञापनबेयोर पछि छोड्यो। उनको आमा एकसाना नामक शहरको हो।
इमानुएलले तीन भाइ र तीन बहिनीहरू छन्। उहाँ आफ्ना बहिनीहरूमध्ये एक इआबो नजिक पुग्नुभयो। तिनको साना भाइको नाम रोमीमी एडबेयरी हो। बाँकी दुई बहिनीहरू लुसिआ एडबेयरे (बहिनी), मेगी एडबेयरे (बहिनी) हुन्। पत्रुस एडबेयर्स उनको बिहीबार भाइ हो।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक मुद्दाहरू
स्ट्राइकर एडबेयोरले भर्खरै आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा एक लामो र विस्तृत पोस्ट लेखेका व्यक्तिगत दुखाइ र पारिवारिक विफलतालाई बेवास्ता गर्नको लागी कि उनले आफ्नो विगतमा अनुभव गरेका छन्, यसका बारेमा थाहा पाएकी उनको परिवारले उनको फायदा लिन खोजे।
उनको सार्वजनिक मा लामो पोस्ट फेसबुक पृष्ठले उनको पारिवारिक समस्याहरूको वर्णन गर्दछ।
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे: "एसईए, मैले यी कथाहरूलाई लामो समयसम्म राखेको छु तर मलाई लाग्छ आज यो तपाईं संग केहि साझा गर्न लायक छ। यो साँचो कुरा हो कि पारिवारिक मामलाहरु को आंतरिक मा हल हुनु पर्छ र सार्वजनिक मा नहीं हो तर म यो गरेर रहयो हूँ कि आशा छ कि सबै परिवारहरु मेरो मा के भयो देखि सीख सकते हो। साथै, ध्यान राख्नुहोस् कि यो कुनै पनि पैसाको बारेमा छैन।
17 को उमेर मा, एक फुटबलर को रूप मा मेरो पहिलो वेतन संग, मैले आफ्नो परिवार को लागि एक घर बनाए र यकीन छ कि उनि सुरक्षित हो। तपाईं सबैलाई थाहा छ, मैले 2008 मा वर्षको अफ्रिकी खेलाडीको ट्राफी पाएको छु।
मैले सबै आमाको साथमा सबै चीजको लागि धन्यवाद लिन पनि साथ दिए। त्यही वर्षमा मैले लन्डनलाई विभिन्न मेडिकलका लागि ल्याएँ चेक-अपहरू.
When मेरी छोरी जन्मेको थियो, हामी मेरो मामिलाई सम्पर्क गर्न को लागी सम्पर्क गरौं तर उनी तुरुन्तै फोन लियो र यो बारेमा सुन्न चाहँदैनन्। तपाईंको भर्खरैका टिप्पणीहरू पढ्नुहोस्, केही मानिसहरूले मेरो परिवारलाई भने र मैले टीबी यहोशूलाई सल्लाह लिनुपर्छ। 2013 मा, मैले आफ्नो आमा पैसा दिएँ ताकि उनी नाइजीरियामा सल्लाह लिन सक्थे। उनी 1 हप्ताको लागि रहन चाहन्थे; तर2दिन तिनको बस्थेमा, मैले फोन छोडेकी थिइन्। यसबाहेक सबै एलले मलाई आमालाई कुकीज र विभिन्न चीजहरूको कारोबार सुरु गर्न ठूलो रकम प्रदान गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपले, मैले तिनीहरूलाई उनीहरूको नाम र तस्वीर राख्न अनुमति दिएँ ताकि तिनीहरूले अधिक बिक्न सक्दछन्। छोराले आफ्नो परिवारलाई समर्थन गर्न को लागी आफ्नो शक्तिमा के गर्न सक्छन्?
एक वर्ष पहिले, मैले $ 1.2 मिलियन को लागि पूर्वी लङ्गे (घाना) मा एक घर खरीदा। मैले आफ्नो पुरानो बहिनी, योबो एडबेयोर त्यस घरमा बस्न यो सामान्य पाए। मैले मेरो पनि अनुमति दिएँ सौतेनी भाई (दानियल) एउटै घरमा बस्न। केही महिना पछि, म छुट्टीमा थिएँ र त्यो घर जान लागे। लाई मेरो आश्चर्य, मैले ड्राइभमा धेरै कारहरू देखे। वास्तवमा, मेरी बहिनीले मेरो घर बिना जान्न भाडामा लिने निर्णय गरे। उनले पनि दानियललाई त्यस घरबाट बाहिर ल्याए। ध्यान दिनुहोस् कि घरको बारेमा 15 कोठाहरू थिए। जब मैले उसलाई बोलाए र सोधें व्याख्या, उनले दुरुपयोग गर्न र फोनमा मलाई अपमान गर्न 30 मिनेट लिनुभयो। मैले आमालाई टी व्याख्या गर्न बुलाएँत्यो स्थिति र उनले मेरो बहिनीको रूपमा गरे। यो एउटी बहन भन्छु म अपमानजनक हुँ। उसलाई गाडी चलाइरहेका गाडी वा आज पनि बेच्ने कुराको बारेमा सोध्नुहोस्?
मेरो भाइ कोला एडबेयर, अब 25 वर्षको लागि जर्मनीमा रहेको छ। उसले मेरो घरमा4पटकको बारेमा फिर्ता घर फर्क्यो। म उनको बच्चाहरु को शिक्षा को पूरी तरिका कवर गर्छु। जब म मोनाकोमा थिएँ, उहाँ मलाई आउनुभयो र एक व्यापार सुरु गर्न पैसा सोध्नु भयो। केवल परमेश्वरले जान्नुहुन्छ मैले कतिलाई दिएँ। आज त्यो व्यवसाय कहाँ छ?
जब हाम्रो भाइ पत्रुस बितिसकेपछि मैले कोलालाई पैसा कमाएको थिएँ ताकि उनी घर फर्केर हिँड्न सकेन। उहाँले दफनमा कहिल्यै देखाउनुभएन। अनि आज त्यो वही भाइ (कोला) मान्छे भन्छु कि म पत्रुसको मृत्युमा संलग्न छु। कसरी? उहाँ एउटै भाइ हुनुहुन्छ जुन हाम्रो परिवारको बारेमा केहि पैसा लिन को लागी "सूर्य" मा गलत कथाहरू बताईयो। तिनीहरूले मेरो क्लबमा एक पत्र पठाएपछि म म्याड्रिडमा थिएँ जब म निकालिएको थिएँ।
जब म मोनाकोमा थिएँ, मैले सोचेँ कि यो फुटबलरको परिवारको राम्रो हुने हुनेछ। त्यसैले मैले निश्चित गरे कि मेरो भाइ रोमीम फ्रान्समा फुटबल अकादमीमा हुन्छ। केहि महिना भित्र; 27 खेलाडीहरूको बाहिर, उहाँले 21 फोनहरू चोरी गर्नुभयो।
म मेरो भाइ पत्रुस एडबेयरे को बारे मा केहि पनि नहीं कहूँगा किनकि त्यो आज यहां छैन। उसको आत्मा शान्तिमा रहन सक्छ।
मेरी बहिनी लूसिया एडबेयोरले पछाडि बताइरहेका छन्र त्यो मेरो पिताले मलाई युरोप ल्याउन मलाई भन्नुभयो। तर उसलाई ल्याउनको उद्देश्य के हुनेछ? युरोप? सबैई यहाँ एक कारणको लागि हो।
म घानामा थिएँ जब मैले मेरो भाइ पत्रुसलाई गम्भीर बिरामीको बारेमा खबर पाए। मैले उहाँलाई भेट्न र सहयोग गर्न टोगोमा सबै भन्दा तेज लगाएको छु। जब म आइपुग्यो, मेरी आमाले मलाई देख्न सकिन र मलाई पैसा दिनुपर्दछ र उनी सबै कुरा सुल्झाउनेछन्। केवल परमेश्वरले जान्नुहुन्छ कि मैले त्यो दिनलाई कति दिन दिएँ। मानिसहरू यसो भन्दै छन् कि मैले आफ्नो भाइ, पत्रुसलाई बचाउन केहि गरेन। म एक मूर्ख हुँ।2घडीहरू टोगोमा केहि गर्न को लागि ड्राइव गर्न को लागी?
मैले आफ्नो परिवारका समस्याहरू समाधान गर्न 2005 मा एक बैठक व्यवस्थित गरें। जब मैले उनीहरूको विचारको बारेमा सोधें, उनीहरूले भने, "म हरेक परिवारको सदस्य बनाउन घर बनाउँदछु र हरेकलाई मासिक वेतन दिन्छु।
आज म अझै जिउँदो छु र तिनीहरूले मेरो सबै सामान साझा गरेको छु, केवल म पनि मर्न सक्दछु।
यी सबै कारणहरूका लागि, मेरो लागि अफगानिस्तानमा मेरो आधार स्थापित गर्न धेरै लामो समय लाग्यो। हरेक पटक म आवश्यकतामा मानिसहरूलाई सहयोग गर्न खोज्छु, उनीहरु मलाई प्रश्न गर्नु पर्छ र सबैले सोचेका थिए कि यो खराब विचार हो।
यदि म यो लेखिरहेको छु भने, मुख्य उद्देश्य मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्न होइन। म अझै अरू अफ्रिकी परिवारहरू यसबाट सिक्न चाहन्छु। धन्यवाद।"
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
इमानुएल एडबेयोरले आफ्नो व्यक्तित्वको निम्न विशेषता राखेका छन्।
शक्ति: Adebayor दयालु, कलात्मक, सहज र बुद्धिमानी हो।
कमजोरीहरू: Adebayor अधिक भरोसा छ।
कुन विज्ञापनबेयर मनपर्छ: सुत्न, संगीत, रोमान्स, भिजुअल मिडिया, स्विमिंग र आध्यात्मिक विषयवस्तुहरू
कुन एडबाइभरले मन नपरेको छ: थाहा छ-सबै मान्छे, आलोचना भइरहेको छ, विगत आउँदो पछि उहाँलाई हिंसा र कुनै पनि प्रकारको क्रूरता।
संक्षेपमा, एडबेयर्स निर्बाध हो र सधैं अरूलाई मदत गर्न इच्छुक छ, बिना फिर्तीमा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न आशा नगर्ने।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -Juju Story
ब्रिटिश मिडियाबाट ठूलो खबर अडिबोयोले आफ्नो आमा, ऐलिसलाई पछ्याउँदै एकै पटक चित्रण गरेको छ र उनीहरूलाई केही प्रकारको मञ्चको आरोप लगाएको छ जसले आफ्नो स्कोर बढाएको छ।
विश्वको शोक थियो तर यो यो व्यक्तिलाई शर्मिला थिएन जुन आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, रियल म्याड्रिड र अब टोन्टेमहमको लागि खेलेको छ र जो कि उनको उमेरबाट जान्छ, स्वाभाविक रूपले उनीहरूको मकवानपुरमा बाँधिनै पर्छ। तर कनन पुरुषहरूले उसलाई विश्वास गरे कि उनको आमा जिम्मेवार थियो। अनि उनले उनलाई सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाए। उनले टोटेमहम्ममको लागि 12 निकायमा दुई गोल गरेपछि उनी आफ्नो आरोप लगाएका थिए।
मेरो भाइ ब्रेकवाड गरिएको छ --काला एडेबेओ उनको भाइ 2015 मा भन्यो। कोला, 42, जर्मनीमा एक ट्रक चालकले युरोपमा मिडियालाई सम्बोधन गर्न थालेको थियो कि अफम्युले "मुस्लिम अल्फस जसले उहाँलाई भने कि हाम्रो आमाले गोल गर्न को लागी तिनको असक्षमताको पछि लागेका थिए।" कोलाले भने कि यो अचम्मलाग्दो छ कि इमानुएलले उनीहरूको विश्वास गरे। र Adebayo को आकार को बदलन को लागि संघर्ष को बजाय उनले खुद को जादूगर को एक कल्पनात्मक डर द्वारा अभिभूत गर्न को अनुमति दिए।
उहाँले जारी राख्नुभयो ...Adebayo पनि खेलिरहेको छैन, के बढी स्कोर गर्ने लक्ष्यहरू। आकारमा फर्कन र आफ्नो स्थान लिने संघर्षको तुलनामा उहाँ कल्पनाशील आत्माहरूसँग व्यस्त हुनुहुन्छ। र भन्यो आत्माहरूको विरुद्धमा उहाँलाई पैसा खर्च गर्दैछ।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -अफ्रिका बेस्ट प्लेयर
उपहार दिइएको आक्रमणकारीले एक्सएनएमएक्सका लागि अफ्रिकीको शीर्ष खेलाडीलाई अफ्रिकी फुटबल (CAF) द्वारा आयोजित पुरस्कारको उपाधिमा राखिएको थियो। एडबेयोरले मिस्रका मोहम्मद अफ्रिका र घानाको माइकल एसेनले हराएका उम्मेदवारलाई हराएका थिए जसले सीएएएफको 2008 सदस्य-राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय टोलीका टोलीलाई मतदान गरे।
2008 को लागि अफ्रिकी शीर्ष खेलाडी अवार्ड प्राप्त गर्ने एडबाइर
त्यो पुरस्कार मा आफ्नो आमा संग थियो, जहाँ उनले एक क्रिस्टल ट्रफी र $ 20,000 पुरस्कार प्राप्त गरे। उनी अफगानिस्तानको उत्कृष्ट खेलाडीको रुपमा मान्यता प्राप्त पहिलो टोगोलिस खेलाडी हुन्।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -उनको प्रकारको कार
उहाँ एक पटक अफ्रिकाको सबैभन्दा अमीर खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। धेरै धनहरु आफ्नो हात मा, उहाँले के गर्दछ सबै भन्दा राम्रो गर्दछ। तल देखाइएको धेरै महंगी कारहरू खरिद गर्दै।
एडबेयर्सको चिसो कार
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -आफ्नो फोन बन्द गर्न बिर्सनुभयो
Adebayor धेरै ढोका र नाटक हुन सक्छ। तिनी एकपटक बीबीसीको जापान बनाम क्यामरून फुटबल म्याचको बीबीसीमा आइपुग्दा वा एयरमा हुँदा ठोक्कै बन्द हुँदा आफ्नो फोन राखे।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -टोली बस आक्रमण
जनवरी 2010 मा, एडबेययर एक खेलाडी थियो जब टोगो टीम को बस अंगोला मा 2010 अफ्रीका कप राष्ट्र को बाटो मा बन्दूक को तहत आयो।
एङ्गल्याण्डको एक्सएनएक्सएक्स अफ्रिकी कप राष्ट्रको दौडमा उनले एन्कोलाले क्रिसमस आतंकवादी हमलालाई बचाउन पछि एडबेयोर चित्रण क्षण पश्चात्ताप गर्यो। आक्रमणले टोगो राष्ट्रिय फुटबल टोलीको एक जना चालक र एक जना घाइते भएका छन् र6अन्यले घाइते भएका छन्। सौभाग्य देखि एडबेयोर बच्यो।
2013 मा, एडबेयोर टोगो टोलीलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि एनएनएनएक्सएक्स अफ्रिका कप राष्ट्रका लागि फर्काइएको थियो, जहाँ उनले क्वार्टर-फाइनलका लागि अर्कालाई मदत गरे। उनले अहिले 2013 लक्ष्यहरूको साथ टोगोको सबै-समयको शीर्ष गोल्डकार्डक हुन्।
इमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य -एक जनावर
एडबेयर्स अफ्रिकामा आफ्नो देशको देशको लागि एक बलियो दाता हुनुहुन्छ। तल उनको समाजमा फिर्ता भुक्तान गर्ने एक तस्बिर हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: इमानमानुएल एडभयर्स बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
टेको बेंजामिन नोभेम्बर 18, 20189मा: 03 बिहान
यो दुनिया सरल तर खतरनाक छ किनकि हामी मानव हो लागत। चाहे तपाईं राम्रो वा खराब गर्नुहुन्छ, तपाईं आलोचना गरिनेछ, आफ्नो वाहक माथि राख्नुहोस्। तपाईं आशिष् हुनुहुन्छ